Ny fanakanana dia ny fanidiana ny soavaly amin'ity tranga ity amin'ny: ny milamina, milamina na boaty, ary io no toerana andaniany saika mandritra ny tontolo andro. Ny fanamafisana ny soavaly dia manova ny rafitra sosialinyl, ny tsy fisian'ny fahalalahana mihetsika miteraka fahasosorana, izany dia mety hitarika ny soavaly hiteraka toe-javatra misedra mitoka-monina sy adin-tsaina.
Ho an'ny soavaly ny ny mitoka-monina dia ny manala azy ireo ho sambatra tanteraka. Ny fanokanan-tena dia manafaka azy ireo amin'ny fiarovana azo avy amin'ny omby ary noho izany dia mora tohina izy ireo. Tsy ilaina koa ny miaraka amin'ny soavaly amin'ny soavaly, afaka miaraka amin'ny biby hafa izy io mba tsy hahatsiaro ho irery.
Etsy ankilany, ny soavaly mitazona, na dia manana namana ao anaty boaty aza ny mpitaingin-tsoavaly hafa, raha tsy mifanaraka, dia mety hiteraka tebiteby. Ireo fihetsika ireo dia mety hisy vokany toy ny mampihena ny fampisehoana ary, noho izany, ny soavaly soavaly satria misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamanao izany.
Ny vatana sy ny tendrony dia natao ho an'ny fivezivezena tsy tapaka. Noho izany, ny fanindronana dia mifanohitra amin'ny toetran'izy ireo, noho izany dia zava-dehibe amin'ny fahasalamany ny mamela azy ireo, fara fahakeliny, ora vitsivitsy isan'andro handao ny tranon'omby ary hifindra malalaka, any amina sekoly iray na mitaingina fiara, ary ambonin'izany rehetra izany, mba hahazoana antoka fa tsara indrindra -toerana mandritra ny fijanonanao eo amin'ny sakana satria io no toerana andanianao ny ankamaroan'ny fotoananao ary ny zava-drehetra dia tokony ho amin'ny toe-javatra mety indrindra.
Mety izany boaty dia ahazoana aina sy amin'ny orientation mety, mieritreritra tsy amin'ny maripana ambony amin'ny fahavaratra ihany, fa amin'ny hafanana ambany amin'ny ririnina ihany koa. Ny fandrefesana dia zava-dehibe sy miovaova, satria hiankina amin'ny haben'ny soavaly ireo. Ny gorodona sy ny rindrina dia tokony ho fitaovana azo sasana mba hamelana ny fahadiovana sy ny famonoana otrikaretina. Soso-kevitra ny hisian'ireo zoro fisotro sy mpihinana zoro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » tranon » Fanindronana soavaly